PR ọkachamara: You're na-agụghị CAN-SPAM | Martech Zone
PR Ndị ọkachamara: A naghị agụpụ gị na CAN-SPAM
Ihe omume CAN-SPAM apụtala kemgbe 2003, mana ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze -aga n'ihu izipu uka emailings kwa ụbọchị iji kwalite ndị ahịa ha. Ihe omume CAN-SPAM doro anya, ọ na-ekpuchi “ozi elektrọnik ọ bụla nke bụ isi ebumnuche ya bụ ịkpọsa ngwa ahịa ma ọ bụ ịkwalite ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ azụmahịa."
Ndị ọkachamara PR na-ekesa mgbasa akụkọ maka ndị na-ede blọgụ tozuru oke. Na FTC ntuziaka doro anya maka emailers nke azụmahịa:
Gwa ndị nnata otu esi pụọ na ịnweta ozi email n’ọdịnihu gị. Ozi gị ga-enwerịrị nkọwa doro anya ma doo anya banyere otu onye nnata nwere ike isi pụọ na ịnweta email gị n'ọdịnihu. Dere ọkwa a n’ụzọ dị mfe maka mmadụ nkịtị ịchọpụta, ịgụ, na ịghọta.
Kwa ụbọchị m na-anata ozi ịntanetị site na ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze na ha mgbe nwee usoro ịpụ apụ ọ bụla. Ya mere,… M ga-amalite jide ha aza ajụjụ na ịgba akwụkwọ ihe Mkpesa FTC site na email obula m na-enweta nke na-enweghi usoro ipụpu aha. Aga m akwado ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ ka ha mee nke a. Anyị kwesịrị ijide ndị ọkachamara a aka.
Ndụmọdụ m nye ndị ọkachamara PR: Nweta onye na-ahụ maka ọrụ email ma jikwaa ndepụta gị na izipu ozi sitere na ya. Achọghị m ịnata ozi ịntanetị dị mkpa, mana ọ ga-amasị m ịnwe ohere ịpụ na nke ndị na-adịghị mkpa.
Tags: nwere ike-spamozi emailozi mkpọpu alaọkwaprpr nkwụsịmmekọrịta ọhanezespam
Ọfịs gị, Adreesị gị, Ahịa gị
Ọ dịghị mgbe ọ dị mfe dịka Fans na ndị na-eso ụzọ
Apr 21, 2010 na 8: 27 AM
Enwere ajụjụ dị iche ebe a, nke bụ, “gịnị kpatara ndị ahụ anaghị eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri?”
Dị ka a PR Ihọd onwe m (mgbe mgbe abịakwutere gị, ezie), M na-atụ ụjọ na echiche nke uka email blasts. Omume kachasị mma na-aga n'ihu ịmara ndị na-ege gị ntị na ọrụ aka na-amasị ha, kama ịfụfụ ma kpee ekpere.
Gị post-eduga ná a na-elu ajụjụ ezie na - anyị kwesịrị mgbe ahụ na-etinye a “Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị ga-kama ịnụ n'ọnụ m” -esque akara na njedebe nke ọ bụla n'otu n'otu-agwa email?
Apr 21, 2010 na 11: 35 AM
Ndewo Dave! Ma ọ dịkarịa ala, e kwesịrị inwe akara na ebe ahụ. Ma email a na-agwa onye ọ bụla apụtaghị na ọ bụghị SPAM. Enweghị ọnụọgụ ndepụta 'opekempe' maka email dabere na azụmaahịa. 🙂
Ọ bụrụhaala na ọ bụghị nke onwe ma ọ bụ nkwado n'ọdịdị, ekwenyere m na ndị ọkachamara PR kwesịrị ikwenye.
Apr 21, 2010 na 2: 02 PM
Echere m na inwee nnukwu isi. Would ga-eche na oge ụfọdụ ndị ọkachamara PR ga-amụta na ha kwesịrị ịre ndị ahịa ha dabere na mmekọrịta siri ike kama ịkwanye mgbasa ozi… Ha kwesịrị opekata mpe na ị gaghị ewe iwe na blogger na ndị na-ege ntị 😉
Apr 24, 2010 na 9: 15 AM
Enwere ndekọ ọ bụla banyere ole mmadụ nwere ike ịda iwu Spam na-akwadoro site na ụbọchị site na iwu anakọtara?
Apr 27, 2010 na 2: 01 PM
Sọpụrụ CAN-SPAM kwesịrị ịbụ ogwe dị mfe iji gafere, mana enwere ụfọdụ nsonaazụ pụrụ iche maka usoro PR nkịtị ma ọ bụrụ na ị mezuo ezi nnabata. Gbakwunye njikọ wepu aha na adreesị anụ ahụ gị kwesịrị ime ka ị nweta ọtụtụ ụzọ ị ga-esi nọrọ ebe onye ọ bụla nọ na PR na-eme nke a. Agbanyeghị, na teknụzụ n'okpuru CAN-SPAM, ozugbo mmadụ debanyere aha, ị nweghị ike izigara ha email ọzọ, belụsọ na ha laghachi. Could nwere ike ịtụle ndị ahịa dị iche iche dịka "usoro azụmahịa dị iche iche" n'okpuru Iwu dịka onye nta akụkọ nwere ike igbu maka akụkọ na otu onye ahịa , ma tụlee ntọhapụ gị na ihe efu ọzọ. Ọzọkwa, dị ka onye nnọchi anya (na-eme dị ka onye mbipụta) nke onye mgbasa ozi, ị ga-achọ ịkekọrịta nhọrọ ịpụ na ndị mgbasa ozi (onye ahịa gị) ka ha ghara iziga na adreesị ozi-e ahụ ọzọ- ọzọ enwe nsogbu na usoro PR. Nwekwara ike ịrụ ụka na ị naghị ere ngwaahịa a ajụjụ maka onye nta akụkọ ka ọ bụrụ onye ahịa ikpeazụ, yabụ na ị na-ezipụ ozi email ma ọ bụ azụmahịa. Ma ọ bụrụ na mmadụ ebipụta ozi kọntaktị maka nzube nke ịnweta nkwupụta mgbasa ozi, enwere nkwenye pụtara. Akwụkwọ ịma ọkwa ebe a ziri ezi na ọ bụ maka ịchụ nta na ihe kachasị mkpa maka onye nta akụkọ ahụ. Spam dị na anya onye na-ahụ ihe. Naanị ihe ị ga - eme CAN-SPAM echiche maka ụbọchị ahụ!
Apr 27, 2010 na 2: 10 PM
Todd- Amaara m na e nweela ihe karịrị 100 Can-Spam ikpe. Ndị FTC nwere ike ịgba akwụkwọ yana State AG, yana ndị ISP dị ka AOL nwere ike ịgba akwụkwọ n'okpuru Can-Spam. Yabụ ụlọ ọrụ dịka Microsoft enwetala nnukwu mmerụ ahụ site na ndị na-eme ihe ike na-eme mpụ ma ahụla m FTC si na $ 55,000 ruo $ 10 nde. Facebook enwetawo nnukwu onyinye na-abịa ihe ruru $ 80 nde. Ihe ozo bu na achikota otutu onyinye. Ọtụtụ nnyocha na-ejedebe na mpaghara na-enweghị nkwupụta akụkọ, yabụ ọnụ ọgụgụ nke ndị mmanye iwu ga-eyi ka ọ bụ ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ. Achọrọ m ịjụ ọfịs ha maka ozi ọha na eze maka nke a ma hụ ihe m nwere ike igwu. Cheers!